नाकाबन्दी? थाहै छैन – Gulmiews
नाकाबन्दी? थाहै छैन
२३ पुष २०७२, बिहीबार १८:५६ Sanju Kauchha
गुल्मी, २३ पुष । गुल्मी–भारतले गरेको नाकाबन्दी पछि देशमा धेरै कुराको संकट भइरहेको छ। इन्धन, खाद्यान्नलगायतका सामग्रीसँग सर्वधासाधारणले खास सरोकार राखिरहेका छन्। आपूर्तिमा आएको असहजतापछि इन्धन र खाद्यान्नको अभाव महशुस भएको हो । तर, गुल्मीका दुर्गम गाउँका स्थानीयले नाकाबन्दी ‘खासै थाहा नपाएको’ बताए।
गाडी चढ्दा इन्धन अभावले भाडा बढेको र फाट्टफुट्ट नुन तेलमा भाउ बढेको बाहेक नाकाबन्दी बारे आफूहरूले खासै थाह नपाएको उनीहरूको भनाइ छ। परनिर्भरता बाक्लिँदै गएको भएपनि गाउँघरका स्थानीयलाई भने आफैले उत्पादन गरेको खाद्य सामग्रीले ढाडस दिएको छ।
गुल्मी नेटाकी तारा श्रीसको घरमा अघिल्लो बर्ष उत्पादन भएको मकै ।क्षेत्र नम्बर तीनको विकट गाउँ नेटा–७ की ३४ वर्षीय तारा श्रीसले नाकाबन्दीले खासै असर नगरेको बताइन्। ‘मगर हौँ, घरमा चामल भन्दा आटो ढिँडोनै बढी पाक्छ,’ उनले भनिन्। उनी र उनका श्रीमान मिलेर घरमा खाद्यन्न, तरकारीलगायतका सामग्री उत्पादन गर्छन् । श्रीमान बिद्यालयमा परिचर छन्। उनले दिउँसोमा जिविस अन्तर्गत ‘लेन्थ वर्कर’को रुपमा काम गर्छिन्। ‘हामी गाउँ घरमा बस्नेलाई नाकाबन्दी अझै एक वर्ष लागेपनि खासै मतलव हुँदैन,’ उनले भनिन, ‘बरु गाउँ छोडेर सहर पसेका अब गाउँ फर्किन्छन् कि !’
श्रीसले हरेक बर्ष १०/१२ मुरी धान, ६/७ मुरि मकै, ३/४ मुरी कोदो, आफूलाई खान पुग्ने तरकारी, आलु, प्याज, टमाटर घरमै उत्पादन गर्छिन्। भुटन खान भैँसी पालेकी छिन्। बारीमै दाउरा हुन्छ, अगेनोमा पकाउँछिन् । संविधान निर्माण पछि नाकाबन्दीले सहर बजारमा बस्नेलाई समस्यामा पारेको भएपनि गाउँलेहरुको जीवनमा खास प्रभाव नभएको उनको भनाइ छ। स्वभावैले नाकाबन्दी पछि पसलमा किनमेल गर्दा महँगो परेको भने उनले बताइन्। क्षेत्र नम्बर तीनकै विकट गाविस दर्लिङ–७ की मिना थापाले पनि सबैले नाकाबन्दी लाग्यो भनिरहेको भएपनि आफूहरुलाई भने खासै असर नपरेको बताइन्। घरमा चाहिने खाद्य सामग्री आफैंले उत्पादन गरेपछि नाकाबन्दीले खासै असर नगरेको उनको भनाइ छ। ‘अलिअलि बजारको चामल किन्छौँ, होइन भने घरमा सबै आफैले फलाइएको खाइन्छ,’ उनले भनिन, ‘भैँसी पालेपछि तेल नचाहिँदो रहेछ।’
नेटा–७ कै ७८ वर्षीय सन्तबहादुर विकले अहिले पनि बारीमा काम गर्छन्। ७ वटा गाई गोरु, तीन वटा भैंसी पालेका छन्। काममा श्रीमती र एउटी बुहारीले सघाउँछन्। ‘नाकाबन्दी, बन्द हडताल के के भयो भन्छन, तर हाम्लाई मतलव छैन बाबु,’ उनले भने, ‘पसलमा खासै केही किनिँदैन क्यारे।’ उनलाई संविधान आएकोसम्म भने थाह रहेछ। भन्छन, ‘संविधान आयो भन्छन तर के आयो केही थाह छैन्।’ विकले आफ्नो भएको जग्गामा सबैले उब्जनी गर्ने हो भने कसैको मुख ताक्न नपर्ने बताउँछन्।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार नाकाबन्दी रहिरहेपनि मकै र कोदोले जिल्लालाई थेग्छ। पछिल्लो समय कोदो र मकैको खपतमासमेत बृद्धि भएको कृषि विकास कार्यालयका कृषि प्रसार अधिकृत रणबहादुर महतोले बताए। ‘गाउँमा मकै र कोदोले गर्दा नाकाबन्दीको प्रभाव नहुनु ठिकै हो,’ उनले भने, ‘चामलमा भने जिल्ला परनिर्भरनै छ।’ जिल्लामा ८० हजार ८५ मेट्रिक टन योग्य खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ भने ८ सय ५५ मेट्रिक टन प्रशोधनपनि खान योग्य खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ। -नागरिकन्युजबाट